ငပလီ ကမ်းခြေလှပမှု အာရှတွင် နံပါတ် (၁) နေရာရှိခဲ့ရာမှ ထိန်းသိမ်းမှု အားနည်း၍ အဆင့်လျော့ကျလာ ဟု? - Yangon Media Group
သံတွဲ၊ ဧပြီ ၂၆
ရခိုင်ပြည် နယ် သံတွဲမြို့နယ်ရှိ ငပလီကမ်း ခြေလှပမှုသည် အာရှတွင်နံပါတ် တစ်နေရာရှိခဲ့ရာမှ ယခုအခါကမ်း ခြေအား ထိန်းသိမ်းမှုအားနည်း၍ အဆင့်လျော့ကျသွားကြောင်း သံ တွဲခရိုင်ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန် ကြားမှုဦးစီးဌာနရုံးမှ ဒုတိယညွှန် ကြားရေးမှူး ဦးမိုးအောင်က ဧပြီ ၂၆ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။ ”ငပလီကမ်းခြေဟာဆိုလုိ့ရှိ ရင် ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်က အာရှ မှာ နံပါတ်တစ်နေရာမှာရှိခဲ့တဲ့ သာ ယာလှပတဲ့ ကမ်းခြေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုလို့ရှိရင် ကမ်းခြေဒေသက တော့ ပတ်ဝန်းကျင်လည်း ပျက်စီး ယိုယွင်းမှုတွေကြောင့် အာရှမှာ နံပါတ်တစ်အဆင့်ကနေ အဆင့် နည်းနည်းနိမ့်ကျသွားတာတော့ရှိပါတယ်”ဟု ဦးမိုးအောင်က ပြော ကြားသည်။
ယင်းအပြင် ငပလီကမ်းခြေ သည် ကမ္ဘာ့သာယာလှပဆုံး ကမ်း ခြေများအနက် အဆင့်ရှစ်နေရာ တွင်ရှိခဲ့သော်လည်း ယခုအခါထိန်း သိမ်းမှုအားနည်းခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာ့အဆင့် ၂၅ အထိကျဆင်း ခဲ့ရကြောင်းလည်း မတ် ၁၁ ရက် က ငပလီတွင်ပြုလုပ်သည့် ကမ်း ခြေဒေသ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်း ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ဟို တယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ပြော ကြားခဲ့သည်။ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် ငပလီကမ်း ခြေတွင် ပြည်တွင်းခရီးသည် လေး သောင်းကျော်နှင့် ပြည်ပခရီးသည် ခြောက်သောင်းကျော် လာရောက် လည်ပတ်ခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင် လက် ရှိအချိန်အထိ ပြည်တွင်းခရီးသည် ၁၈ဝဝဝ ကျော်နှင့် ပြည်ပခရီးသည် နှစ်သောင်းခန့် လာရောက်လည်ပတ် ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ငပလီကမ်းခြေတွင် စည်းကမ်း မဲ့အမှိုက်များစွန့်ပစ်ခြင်းနှင့် ပင် လယ်သဲများအား စည်းကမ်းမဲ့စွာထုတ်ယူအသုံးပြုခြင်းတို့ကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ကမ်းခြေသဘာဝအလှ များ ပျက်စီးလာနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောကြားသည်။
”သဲတွေကို စည်းကမ်းမဲ့ထုတ် ယူနေကြတဲ့အတွက် အခုဖြစ်နေ တာက ကမ်းခြေဟာသဘာဝနဲ့ မတူ တော့ဘူး။ လုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ ကမ်းခြေတစ်ခုလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ ထိန်း သိမ်းခြင်းမရှိဘဲ ဒီအတိုင်းသာဆက် သွားနေမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ငပလီကမ်းခြေဆိုတာကြီးဟာ တစ် နေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပျောက်ကွယ် သွားနိုင်ပါတယ်”ဟု ငပလီဒေသခံ ဦးညီလေးက ပြောသည်။ ကမ်းခြေအားထိန်းသိမ်းမှု အားနည်းနေမှုများကို ဟိုတယ် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အစိုးရနှင့်ဒေသ ခံများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဆို ပါက ကမ်းခြေပြန်လည်လှပလာ နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမိုးအောင်က သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲတွင် နိုင်ပွဲအများဆုံးရ ကစားသမား စီရော်နယ်ဒိုဖြစ်လာ
ကောင်းမှုတော် စေတီတော်၏ ရွှေဆေးခွာရာမှ ထွက်ရှိသည့် အပိုင်းအစများဖြင့် ကောင်းမှုတော်စေတီပုံစ?
တနင်္သာရီမြို့နယ်တွင် ငွေကျပ် ၉၆၅ သိန်းတန်ဖိုးရှိ ဘိန်းစာမှုန့်အိတ် ၃၇ အိတ်နှင့်အတူ လူနှစ်ဦး ဖမ်းဆီးရမိ